IFTIINKACUSUB.COM: Kalyahayga mid ka mida ayaan iibiyay ,si aan Yurub ugu tahriibo!Qaybtii 5-aad.
Kalyahayga mid ka mida ayaan iibiyay ,si aan Yurub ugu tahriibo!Qaybtii 5-aad.
Akhristayaal waxa ay sheekadu inoo maraysay,wiilkii dhalinta yaraa oo jooga dalka Talyaniga ,kaasi oo laga qaaday dhamaan farahii uu cabsida iyo argagaxa ka qabay ee Dublin.
Hadaba inta aynaan sheekada qaybteeda kale aynaan guda galin, aan waxyar idiin iftiimiyo waxa uu yahay heshiiska Dublin ee ay wadamada Yurub wada galeen ,iyo waxyabaha ay uga jeedeen.
Ugu horayn waa maxay eraygan Dublin,Dublin maaha eray inooga bahan macne aad usii ridan ,Dublin waxa layidha casimada dalka Eriland,waana magaladii heshiiskan lagu galay,taas awadeed ayaa loogu bixiyay heshiiskii Dublin.Wadamada heshiiska Dublin wada galay waxa ay dhan yihiin 28-32 dawladood haddii aanay ka badnaynba .
Heshiiskani asal ahaantiisa waxa uu yahay mid ay rabaan in ay ku xakameeyaan ,dadka magan-galyo doonka ah.Tusaale ahaan : haddii wadan Yurub ka mida aad faraha dhigato ama ay faraba kaa qadaan,waxa uu heshiiskani dhigayaa in aad wadankaasi xaq iyo xuquuq ku leedayay, inta ay kiiskaga faraha ku hayaan.
Waxa kale oo uu heshiiskan Dublin uu dhigayaa ,in wadankaasi faraha kaa qaaday oo kaliya uu kiiskaaga magangalyo uu baadhi karo, dalkalana aadan u talaabi karin,haddii aad u talawdo farahagana ay helaan ,waxa uu wadankaasi xaq u leeyahay in uu kugu soo celiyo wadankii u horeeyay ee faraha kaa qaaday.
Waxa kale oo isna heshiiska ka mid ah, in lagu xakameyo dadka sharciyada wadamada ka qaatay ee leh faraha Dublin si aanay u guurguurin oo aanay marba wadan sharci uga qaadan.
Dhinaca kale ,sababta ugu wayn ee Talyaniga dadku uga cawdaan ayaa waxa ay tahay ,iyaga oo aan ka helin wax nolol maalmeed ah oo ku filan ,iyo isaga oo aan bixinin ama aan dadka siinin waxyabaha kale ee wadamada kale ee Yurub ay dadku u yimadaan ,sida Shaqooyinka,Caydh iyo dhaqalaha kalaba.
Aynu dib ugu soo noqono sheekadii iyo wiilkii dhalinyarada ahaa ee Kelyahiisa mid ka mida u iibiyay in uu safar tahriiba ugu galo.Waxa ay sheekadu inoo maraysay isaga oo jooga Talyaniga lagana qaaday farahi, galayna xeerkii Dublinka ee uu awalka ka cabnsida qabay.
Waakan isaga oo sheekadii halkii inooga wada:
Murugada iyo dhibta i haysata ee ay igu sameeyeen faraha la iga qaaday marka laga yimaado,waxa kaloo ii hadhay safar aan ku mari doonaa, wadammo dhawr ah oo Yurub ah,waayo meesha aan u socdaa waa wadanka Sweden,jidka aan u marayaana waxa uu yahay safar tareen iyo babuurba ah.
Mukhalaska iyo magafayaasha yaryar ee wadanka Talyaniga joogaa maaha kuwo la dhayalsan karo,waxa aan heshiis kale la galay nin Tahriibiye ah,waxa aan kula heshiiyay in uu Tareenka ama Baska mid ahaan uu isaaro,waxa aan u sheegay dalka aan beegsanayaa in uu yahay Sweden.
Saxibayaal Sweden kalgacal gaar ah oo aan u hayaa ma jirto, aqoon iyo waya'aragnimo dheeraada oo aan u leehayayna idiin sheegi maayo,balse waxa jooga oo in badan aan kasoo wada xidhiidhi jirnay, dhalin asxaabtayda ah,tasaa waxa ay i tustay bil in aan Sweden nolol ka raadsado .
Waxa uu ninkii mukhalaska ahaa aniga iyo dhalinyaro kale uu nosoo gooyay tigidhadii aanu ku raaci lahayn Tareenka,waxa uu noo sheegay in aanu isaga gudbi doono sadax wadan oo kala ah Faransiiska,Jarmalka iyo dalka Dhenmarak, kadibna aanu Sweden u gudbi doonno.
Xiliga aanu safaradayada galaynaa waa xili qabawgii ii sii yaraanaayo,jawigu maaha mid fiican,balse aniga waxaa i caawinaaya aqoonta aan u leeyahay jawigan oo kale , waayo waxaan ka imi dhul intiisa badan iska qabooba ah.
Goor habeenimo ah ayaanu Tareenkii soo fuulnay,ninka isagu mukhalaska noo ah ee na tahriibinayaa,waa nin tahriibka xariif ku ah .Tareenka markii uu nasoo saaray waxa uu noo sheegay in uu isagu fadhiisan doono meel gaar ah ,annaga oo markaasi ka kooban dhawr dhalinyara ahna waxa uu nagu war galiyay in aanan meel wada fadhiisan,si aan la isugu kaaya tuhmin.
Waxa kaloo taloyinkii uu nasiiyay ka mid ahaa,in aanu Mobilada aanu sidano aanu ku mashquulno,si aan lanoogu dareemin in aanu nahay soo galeeti ama dhoorayaal wadanka ku cusub;waxa kaloo uu nagu booriyay , in aanu koofiyado iibsano, kadibna aanu dhinac-dhinac u gashano.
Ilahay mahadi ha ka gaadhee waxa aanu si hawl yar uga soo gudubnay dhamaan xududihii,waxa aanu jidka kusoo jirnay laba habeen,nasiib wanaag waxa aanu soo galnay Sweden.
Wakhti badan ayaan ku fikiri jiray in aan Sweden cagaha dhigo, Ilahayse waa inab keenay,hadana iyada oo ay sidaasi tahay wali igamay hadhin murugadii iyo uurkutaladii iga haysay Iibkii kalidayda iyo farahii Talyaniga la igaga qaaday oo caqabad kale igu noqon kara.
Maaha murugaadaasi mid si dhib yar iiga tagaysa,waxa aan markasta soo goconayaa iibkii Kelidaydii,waxa aan dareemayaa madamaa aanan helin nasiino iyo dhakhtar in cafimaadkagii uu marba marka ka danbaysa uu soo xumaanaayo.
Waxa aan garaacday talafoonkii saxiibkaygii Sweden deganaa,nasiib wanaag waxaabu degen yahay magaalo aan ka fogayn xuduudka Dhenmarak iyo Sweden.Waanu kulanay waxaanu i geeyay gurigiisa.
Muddo aan ayaamo ka badnayn markii aan la joogay,waxoogaa sawiro ahna aan ku galay magaladii uu joogay goobo ka mida,Facebooka iyo baraha bulshadana aan ku tuuray sawiro aad u cajaa'ib badan ,si aan dadkii iyo saxiibaydayba ugu faano in aan Yurub joogo,ayaanu isla garanay wixii iminka ka danbeeya in aan isdhiibo.
Saxiibkay waxa uu ila toostoosiyay habkii iyo hanaankii aan isku dhiibi lahaa, maalintii danbe waxa uu i keenay Xafiiskii laanta Socdaalka ee la iska dhiibaayay.
Isagu ilama uusan soo galin markiiba dibada ayuu igaga hadhay.Naxdin iyo warwar ayaa maskaxdayda ku wareegaaya waxaan isleeyahay armaa farahii Talyaani ay kasoo baxaan.
Saacad ka bacdina waxa aan goostay Tikidhkii balanta ,waxyar ka dibna waaba la ii baaqay,waa gabadh cadaana oo Indho buluga leh iyo Timo baroona ,waatan mudaba ku taamayay in aan la kulmo , ,salaan iyo dhoola-cadayn ay ii muujisay ka bacdi ,waxa ay sidii Hal maqaar loosido ii horkacday halkii shaqadeedu ahayd.
Waxa ay i galisay qol wayn oo ay yalaan Kombutaro faraha dadka lagu baadho,markaaba fahmay in la doonaayo in farahayga la ogaado,waxa la i joojiyay goob uu yaalo hal kumbiyutar waxa faraha la iisaaray goobo cayiman oo ay iyagu garnayaan,waxba la iga qorqoray,kadibna waxa la igu yidhi iska fadhiiso,dib ayaa lagugu yeedhi doonaaye.
Waxa aan soo fadhiistay halkii aan markii hore ka kacay.Waxyar intii aanan fadhiyin waaba gabadh kale oo xiimaysay "shaqo badana ma Jinbaa, sawtii iminkuun mid aanu kala faruqnay "tan labad waxa ay yeedhinaysa magacaygii oo sidii aan usu aqaanay mooyaane ay si kale ugu dhawaaqayso,bal aduu faham (khuushaa shiia) wuxuunbaa i yidhi walee magacaa la silcinaya waa kaagii.
Kacay una tegay,gacan qaadka iyo Hey heyda oo salaantooda ah ,waxa aad moodaa in ay ku subxanalaysanayaan.Halkii tii hore ila martay meel aan ahayn ayay tani iila carawday,fahmay markaaba in xaaladu kululaatay ; waxa kaloo markan garbahayga socda nin la yidhi waxa uu kuu yahay Looyar "sidan danbi galay" iyo turjumaan luqadayda ku hadlaya.
Qolkii markii aanu fadhiisanay,kalmado aan badnayna la i waydiiyay,waxa markiiba si kooban la iigu sheegay in la iga helay FARAHII TALYAANIGA ,halkaasna aan iska soo dhiibay, naxdin iyo madax wareer awadii waxa aan dareemay in aan Kursiga ka dhacay,balse iyaga ayaa i qabtay.
Waxa la i siiyay Biyo aan cabbo,waxyar ka bacdi hadana halkii ayaa hadalkii la igaga sii waday.Ma jiro wax jixin-jax ama naxariis ,qoftan wax i waydiinaysaa waa mid naxariistii ka tagtay.Sweden ayaa dadka u naxdana ha iga hadho.Waxa kaloo iyana ay i wadiisay ma jiraa wax xanuuna ah oo aanu kaa caawinaa?
Waxa aan iswaydiiyay talaw ma waxa ay soo ogaatay in Kelidaadii aad soo ibisay,waswaas iyo shaki ayaa i galay,balse waxa aan go'aan saday in aan markan u sheego in aan xubin jidhkayga ka maqan aan soo iibiyay ,dhaqalahii iga soo galayna dalkan aan ku imi,taas waxaan uga jeeday bal in ay iigu naxariistaan.Adaaba sheegaaya ,Soray soray oo kaliya ayay i tidhi.
Waxkasta oo aan idhaahdo waa la qorayaa,muddo yar ka bacdina waxa la i keenay meel caruurta lagu xanaaniyo , maadama aan sheegtay in aan caruur ahay,xaqiiq marka la eegana aanan kaba waynaan xiligii caruurnimo.
Waxaa ii bilaaban tay ninkaygii shaqo tagga ahaa,in la igu cayaarsiiyo waxyabaha ay caruurtu ku cayaraan oo ay ka mid yihiin Geemka iyo waxyabaha ay ku madadashaan caruurta waxa ay u yaqanaan wadankan.
Qaybta 6-aad la soco .